डचटाउन Large DutchtownSTL.org Large Dutchtown, सेन्ट लुइस, MO मा ठूलो बस्ने को लागी सानो ठाउँहरु
डचटाउन मा ठूलो बस्ने को लागी सानो ठाउँहरु
प्रकाशित अगस्ट 18th, 2021
त्यहाँ एक शब्द हो कि सधैं दिमागमा आउँछ जब डचटाउन को ऐतिहासिक आवास स्टक को चर्चा: विविधता। डचटाउन सबैको लागी केहि छ - विशाल दुई कहानी घरहरु, बंगलाहरु को एक सरणी ठूलो र सानो, बन्दूक कोटेज, दुई र चार परिवार फ्लैट, र बीचमा सबै।
आज, हामी डचटाउन मा बजार मा वर्तमान मा केहि अधिक विनम्र मापन घरहरु मा एक नजर राख्नेछौं। चाहे तपाइँ एक स्टार्टर घर खोज्दै हुनुहुन्छ, तपाइँ सही आकार को लागी हेर्दै हुनुहुन्छ, वा तपाइँ मात्र cozier सीमितताहरु लाई रुचाउनुहुन्छ, डचटाउन साना प्याकेजहरुमा प्रस्ताव गर्न को लागी धेरै छ।
5457 XNUMX अलाबामा
यो दुई शयनकक्ष, एक नुहाउने बंगला लगभग 800 वर्ग फुट मा तौल छ। खुला ईंट भित्ताहरु घर ल्याउन देहाती, शहरी डचटाउन छिमेक को दक्षिणी छेउमा यो ११२ बर्ष पुरानो घर को शहरी अनुभूति।
$ 92,500 Zillow मा हेर्नुहोस्
सुविधाजनक Chippewa र दक्षिण ग्रान्ड नजिकै स्थित, ३४२५ Keokuk दोस्रो साम्राज्य शैली mansard छत यस ब्लक मा भीड बाट बाहिर खडा छ। दुई शयनकक्ष र दुबै पूरा र आधा नुहाउने, घर धेरै भर्खरै पुनर्वास गरीएको थियो र नयाँ स्टेनलेस स्टील उपकरण, ४२ इन्च क्याबिनेट, र डिजाइनर काउन्टरटप्स सुविधाहरु।
$ 125,000 Zillow मा हेर्नुहोस्
यदि तपाइँ एक ठूलो यार्ड संग एक सानो घर चाहानुहुन्छ, 3425 मोन्टाना तपाइँको लागी हो। करिब square०० वर्ग फुट मा, यो १700 1890 ० कुटीज अझै पनी प्रशस्त छ, तीन बेडरूम, एक नुहाउने ठाउँ, र एक भान्साकोठा मा खाने को पेशकश। बाडिएको डबल धेरै बागवानी, मनोरन्जन, वा तपाइँको पिल्लाहरु लाई जंगली चलाउन को लागी धेरै कोठा छोड्छ। र यदि त्यो तपाइँको लागी पर्याप्त हरियो ठाउँ छैन, मार्क्वेट पार्क सडक को तल केहि ढोका मा अवस्थित छ।
$ 120,000 Zillow मा हेर्नुहोस्
मार्क्वेट पार्क बाट मात्र एक छोटो पैदल दूरी मा अवस्थित छ, यो तीन बेडरूम/पेन्सिलभेनिया एवेन्यू मा एक नुहाउने घर ढु count्गा countertops, स्टेनलेस स्टील उपकरण, र एक सबवे टाइल backsplash संग एक नयाँ नयाँ भान्छा सुविधाहरु। तपाइँ पनि खुला ईंट पर्खालहरु, एक सजावटी फायरप्लेस, र यो अन्यथा नम्र घर भित्र अन्य अद्वितीय वास्तु सुविधाहरु पाउनुहुनेछ।
$ 100,000 Zillow मा हेर्नुहोस्
३२२५ सुखद पर्वत
तपाइँको आस्तीन रोल अप र तपाइँको मिनी घर तपाइँको आफ्नै बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ? यो दुई शयनकक्ष, एक नुहाउने, माउन्ट सुखद मा square ०० वर्ग फुट घर सस्ती मूल्य मा, सार्न मा तयार छ, र तपाइँको परिष्कृत स्पर्श को लागी पर्खिरहेका छन्। तपाइँ शे को डोनट्स बाट मात्र कुना को आसपास हुनेछ, र तपाइँ नजिकै माउन्ट सुखद पार्क को आसपास एक टहल संग तपाइँको बिहान लामो जोन हिंड्न सक्नुहुन्छ।
$ 70,000 Zillow मा हेर्नुहोस्
यस पोस्ट साझा गर्नुहोस् फेसबुक, twitter, वा मार्फत इमेल। यो पोष्ट अन्तिम पटक अपडेट गरिएको थियो अगस्ट 18th, 2021 .
डचटाउन STL.org रियल एस्टेट डचटाउन मा ठूलो बस्ने को लागी सानो ठाउँहरु